Patrick Rajoelina : Les nominations des ambassadeurs feront l’objet d’un appel à candidatures - ewa.mg
News - Patrick Rajoelina : Les nominations des ambassadeurs feront l’objet d’un appel à candidatures
L’article Patrick Rajoelina : Les nominations des ambassadeurs feront l’objet d’un appel à candidatures a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Rugby – «Circuits mondiaux 2020»: hihemotra amin’ny taona 2021 ny tohin’ny lalao
Tsy azo tontosaina amin’ity taona 2020 ity ny tohin’ireo lalao fifanintsanana amin’ny “Circuits mondiaux 2020” taranja rugby. Noho ny valanaretina covid 19 hatrany no anton’izany. Noho ny tsy mbola fa­hazoana antoka tsara ny amin’ilay valanaretina coronavirus, notapahin’ny federasiona iraisam-pirenena fa hahemotra amin’ny taona 2021 ny tohin’ny fifaninanana “Circuits mondiaux 2020”, taranja rugby lalaovina olona fito, lahy sy vavy. Marihina fa misy firenena 10 ny hanaovana izany, ho an’ny lehilahy raha valo kosa eo amin’ny vehivavy. Efa nisy ireo tontosa tamin’izany, saingy eo ihany koa ireo tsy tanteraka noho ny fisian’ny covid-19. Ani­san’ireny ny ao Dubai, izay tokony hatao ny 26 sy ny 28 novambra ho avy izao ary ny any Cape Town, Afrika atsimo, ny 4 ka hatramin’ny 6 desambra 2020. Nisy ny vondrona manokana natsangana handinika ny drafitra amin’ny ho fiverenan’ny fifaninanana ho an’ny taona ho avy. Na izany aza anefa, mbola napetraka ho laharam-pahamehana hatrany ny fahasalaman’ny mpilalao sy ny fahamehana rehetra momba izany. Rehefa nisy ny fifampidinihana tamin’ireo federasiona rehetra sy ny rantsa-mangaikan’ny baolina lavalava maneran-tany, notapahina fa voahosotra ho tompondaka ho an’ity “Circuits mondiaux 2020” ity ny All Blacks, sokajy lahy sy vavy. Izy ireo mantsy no manana isa ambony indrindra tamin’ireo “circuits” efa tontosa. Raha tsiahivina, efa vita ny 6 tamin’ireo 10, teo amin’ny lehilahy, raha 5 amin’ireo 8 kosa ny an’ny vehivavy Etsy ankilany, manohy ny asany hatrany ny federasiona iraisam-pirenena amin’ny fanomanana ny lalao olympika 2021, tanterahina any Japon. Hatreto mantsy, mbo­la vao firenena 21 amin’ny 24 no nahazo ny tapakila hiatrehana izany. Heverina ho­tontosaina ny volana jona 2021 ireo lalao fifantenana farany, hahalalana ireo ekipa telo farany ho any Japon.TompondakaL’article Rugby – «Circuits mondiaux 2020»: hihemotra amin’ny taona 2021 ny tohin’ny lalao a été récupéré chez Newsmada.
Bodybuilding – “Mondial”: nahazo medaly volafotsy i Bigman sy i Maurice
Na teo aza ny fahasahiranana teo am-piaingana, nioty vokatra tsara ny solontena malagasy, miatrika ny andiany faha-12 ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, taranja bodybuilding, any Ozbekistan. Atleta telo lahy hatreto ny efa niakatra sehatra ary nahavita dingana tsara ny roa, i Bigman sy i Maurice, raha toa tsy niakatra ny dingana farany kosa i Tsila. Samy nahazo medaly volafotsy avokoa na i Bigman, sokajy 70-75 kg sy i Maurice, sokajy 80-85 kg. Mafy ny fifaninanana, saingy hita ho tena niomana ireto solontena malagasy ireto. Isan’ny niady ny lohany tamin’i Bigman, i Bakhtiyor (Ozbekistan), i Tushar (Inde), i Yarul (Malaisie) ary i Surhob (Tajikistan).Hiaka-tsehatra ilay vavitokanaNifaninana tamin’i Maurice, tamin’ny dingana famaranana kosa, i Ruzibek (Ozbekistan), i Ahmad (Malaisie), i Gergo (Hungary) ary i Hussain (Maldives). Ho an’i Tsila kosa, nanao izay ho afany ihany izy, raha ny nambaran’ny mpanazatra, saingy tena mafy be avokoa ny mpifanandrina taminy, teo amin’ny sokajy 90-95. Na izany aza, nahavita dingana tsara ihany koa i Tsila, amin’izao fiatrehana fifaninanana eran-tany, izay tena avo lenta izao.Marihina fa hiakatra an-tsehatra, anio, ny solontena vavitokan’ny Malagasy, Randriatahiana Nivo, ka andrasana ny vokatra mety ho azony.Mi.Raz L’article Bodybuilding – “Mondial”: nahazo medaly volafotsy i Bigman sy i Maurice a été récupéré chez Newsmada.
Tonga eto Antananarivo anio: handrasana etsy Ampefiloha i Monja Manitsindava
Niainga omaly avy any Ambondromamy ary handrasana anio eto Antananarivo ny nofo mangatsiakan’i Monja Manitsindava. Hivantana avy hatrany eny amin’ny LTC Ampefiloha izany, raha ny fanazavana avy amin’ny fikambanana Sairy, ivondronan’ireo mpanakanto avy any Androy. Araka ny fampitam-baovao hatrany, nangataka ny Tranompokonolona Analakely na ny Kianja mitafo izy ireo, saingy efa misy hetsika voaomana tamin’ireto toerana ireto. Noho ny hamehana dia tao Ampefiloha no hitan’ny fikambanana sy ny fianakaviana, afaka mandray ny fanomezam-boninahitra ho an’ity andrarezin’ny kanto ity, eto Antananarivo. Tsy mbola voafaritra mazava ny fandaharam-potoana, ho an’ny tohiny. Fantatra kosa fa hanome voninahitra an’i Monja Manitsindava ireo mpanakanto namany, mandritra ny fotoana hiandrasana azy etsy Ampefiloha.Randria.L’article Tonga eto Antananarivo anio: handrasana etsy Ampefiloha i Monja Manitsindava a été récupéré chez Newsmada.
Tao anatin’ny 3 andro: 15 ireo matin’ny covid-19
Nanomboka ny zoma 2 marsa teo hatramin’ny alahady 4 marsa, olona dimy isan’andro no voalazan’ny CCO fa matin’ny covid-19. Mitotaly 15, araka izany, ireo matin’ity aretina ity tao anatin’ny telo andro nisesy.Nahatratra 741 ny tranga vaovao tao anatin’ireo telo andro ireo. 2560 kosa ny totalin’ny fitiliana natao tamin’izany.Ny alahady teo, misy olona 268 marary mafy sy efa tonga amin’ny tranga fahasarotana manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly. 2544 kosa ny mbola manaraka fitsaboana amin’izao fotoana.Misy ihany koa ireo 143 sitrana, ny faran’ny herinandro teo ary efa nody any an-trano. Marihina fa eto Analamanga no anisan’ny betsaka voan’ny valanaretina raha ny tatitry ny CCo hatrany.Tatiana AL’article Tao anatin’ny 3 andro: 15 ireo matin’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Vono olona feno habibiana: voatsatok’antsy ny tarehin’ilay vehivavy
Hatairana ny an’ireo mpandao tao amin’ny fokontany Manengazipo-Ambodisatrana II akaikin’ny seranam-piaramanidina ao Sambava, omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora. Tovovavy iray efa tsy nisy aina intsony sy feno tsatok’antsy tamin’ny tarehy no hita nitsirara tao anaty bozaka, tamina toerana mangingina. Nampandre ny polisy avy hatrany ireo fokonolona ka tonga nijery ny zava-misy ny mpitandro filaminana niaraka tamina mpitsabo iray. Tsikaritra tamin’ny fizahana fa mangana sy nokendaina ny tendany ary tsy nisy fitafy intsony ny tapany ambony. « Tsy nisy trangana fanolanana natao io tovovavy io. Mbola nisy akanjo ny tapany ambany, saingy tsy fantatra ny antony namonoana azy. », hoy ny fanazavan’ny polisy misahana ny fanadihadiana. Notohizany ihany koa fa tsy nahenoana fofon-toaka na zava-mahadomelina ilay maty. Fotoana fohy taorian’izay, fantatra ny mombamomba ilay vehivavy. Vao 21 taona izy ary monina ao Tsararivotra. Tonga naka ny vata-mangatsiakany ihany koa ny fianakaviany. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola misy ny olona ahina ho nahavanon-doza. Misokatra kosa ny famotorana ny raharaha. Henintsoa HaniL’article Vono olona feno habibiana: voatsatok’antsy ny tarehin’ilay vehivavy a été récupéré chez Newsmada.